Home STARS EUROPEAN Ny tantaram-piraisan'i Gerard Pique momba ny tantaram-pahaterahana tsy mbola fantatra loatra momba ny tantaram-piainana
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'Piquénbauer'. Ny tantaram-pitiavan'i Gerard Pique momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny biografia dia mitondra fitantarana feno momba ireo hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana, ny fifandraisany amin'ny fiainana, ny fiainan'ny tena manokana ary ny maro momba ny zavatra tsy fantany momba ny OFF-Pitch.
Eny, samy mahafantatra ny fahaiza-manaony ny tsirairay, saingy vitsy no mihevitra ny biografia an'i Gerard Pique izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Gerard Pique Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Gerard Piqué Bernabéu dia teraka tamin'ny andro 2 tamin'ny Febroary 1987 tany Barcelone, Espaina.
Piqué dia nobeazina tao amin'ny fianakaviana feno harena Catalan. Matetika izy no eo an-tampon'ny lisitr'ireo mpilalao baolina malaza amin'ny ray aman-dreny manan-karena. I Joan rainy dia mpandraharaha sady mpisolovava mahomby. Ny reniny, Montserrat, no talen'ny hopitaly malaza ao Barcelona.
I Little Gerard dia efa nandefa baolina avy hatrany raha vao afaka mandeha araka ny tokony ho izy. Izany no fitiavany ny lalao fa saika nahafaty azy ny fiainany.
Amin'ny maha-zaza 17-volana, ilay mpilalao baolina kitra any Barcelone dia milalao eo amin'ny latabatry ny tranon-drenibeny. Mety efa efa nieritreritra hoe inona no nitranga taorian'izay. Raha nilalao ilay baolina dia nandalo teo ambonin'ny terra ny baolina ary nianjera niaraka tamin'ny fisamborana an'i Gerard Pique.
Ny mpanafika Manchester United teo aloha dia voatery nampidirina hopitaly avy hatrany raha tao amin'ny koma. Soa ihany, kely i Pique no nifoha avy tamin'ny fotoana somnolence nandritra ny andro 2, ho an'ny fifaliana amin'ny fianakaviany sy ny havany. Nahazo ny ady tamin'ny fahafatesana izy.
Gerard Pique- Mandresy ny ady amin'ny fahafatesana
Gerard Pique Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Career Summary
Nanjary liana tamin'ny baolina kitra izy aloha ary nanomboka ny asany tamin'ny 1997 fony izy niditra ny Akademia FC Barcelona fony izy folo taona.
Pique dia nanatevin-daharana ny ekipa tanora indrindra tao amin'ny club izay nantsoina hoe Alevín B. Anisan'ireo mpiaro sy matanjaka indrindra amin'ny ekipany izy. Nianatra nandritra ny taona maromaro izy nandritra ny taona maromaro, namakivaky ny haben'ny tanora ary nahazo lohateny maro teny an-dalana.
Nandao izy FC Barcelona ho an'i Manchester United amin'ny faran'ny vanim-potoana 2003-04. Ny Ligin'ny Premier League dia tsy nandoa ny sarany ho an'i Piqué raha mbola kely loatra izy ka nahazo fifanekena.
Tamin'ny 27 May 2008, dia niverina i Piqué ary nanao sonia fifanarahana efa-taona miaraka amin'i Barcelona, ​​miaraka amin'ny fehin-kevitry ny fividianana fividianana € 5. Naneho ny hafaliany izy tamin'ny famerenana ny sonia tamin'ny klioban'ny zatovolahy, na dia niaiky aza fa nankafiziny ny fitenenany tao Manchester United. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Gerard Pique Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Hatramin'ny nanombohan'ny 2011, Piqué dia nifandray tamin'ny mpihira Kolombiana Shakira. Tsy isalasalana, Shakira sy Gerrard dia iray amin'ireo olo-malaza malaza indrindra eto an-tany. Andeha hojerentsika ny fiarahan'izy ireo mifankatia.
Gerard Pique sy Shakira
Rehefa miara-mivory ireo olo-malaza roa, dia matetika no lasa liana amin'ny tombotso iraisam-pirenena sy hoopla. Ny tantaran'i Shakira sy Espaniola mpilalao baolina Gerard Pique dia tantara iray mitovy amin'izany.
Ny ankamaroanay dia hahatsiaro ny hira Waka Waka izay nilatsaka nandritra ny fiadiana ny amboara eran-tany amin'ny baolina kitra 2010 tany Afrika. Ny hiram-pirenena ofisialin'ity fifaninanana ity dia manana fahitana mihoatra ny 1.6 arivo tapitrisa ao amin'ny YouTube, nosoratan'i Shakira ary nosoratany.
Ilay hira izay nitondra an'i Pique sy Shakira niaraka
Gerard koa dia ampahany amin'ny lahatsary. Nihaona tamin'ny sarimihetsika ity lahatsary ity i Shakira sy Pique ary toa roa latsaka kely ny roa tamin'izy ireo. Faly be i Shakira noho ny fahatsaram-pon'i Gerard Pique raha nahita azy niseho teo amin'ny efijery "Waka Waka (vanim-potoana ho an'i Afrika)".
Jereo ny Gerard Pique ao amin'ny hira "Waka"
Pique no lehilahy tsara indrindra ho azy. Izy no nanitsy ny fony taorian'ny nahavitan'ny fifandraisana 10 taona nifanaovany tamin'i Antonio de la Rúa.
Ny roa dia nandao ny fifanakalozan-dresaka momba ny fifandraisana misy azy ireo. Na izany aza, nisy fifanakalozan-dresaka tao amin'ny famoaham-baovao amin'ny teny Espaniôla momba ny raharaha iray mety. Gazety maro fosafosa no namoaka sarin'ny mpivady nitana tanana sy nanoroka an'i Barcelona. Nifankahalala tamin'ny fifandraisana tamin'ny Martsa 2011 ireo mpivady rehefa nametraka ny fanamafisana momba azy ireo tao amin'ny Twitter sy Facebook i Shakira.
Piqué sy Shakira dia mizara ny tsingerintaona nahaterahany saingy izy no 10 taona ny zokiny. Ny antony bebe kokoa nandraisana ilay mpivady. Samy manana fampakaram-bady Royal ny roa tonta.
Gerard Pique ary ny Royal Wedding Shakira
Notahina izy ireo taorian'izay. Shakira no niteraka ny zanak'izy ireo voalohany, Milan Piqué Mebarak, tamin'ny 22 Janoary 2013 tao Barcelona, Espana, izay nipetrahan'ny fianakaviana. Shakira dia niteraka ny zanany lahy faharoa, Sasha Piqué Mebarak, tamin'ny 29 Janoary 2015. Ity ambany ity dia sarin'i Garard Pique, Shakira sy ny zanany.
Shakira naneho hevitra indray androany momba an'i Gerrard: "Fantatro fa izy ilay olona miaraka amiko fa tsy noho ny tombon-tsoa hafa noho ny fitiavana izay mampiray antsika."
Nisaotra ny baolina kitra koa ny kintan'ny pop noho ny fanovana ny fiainany ary nitondra an'i Gerard tao. Tamin'ny resadresaka nomena talohan'ny famaranana ny fiadiana ny Amboara Eran-tany 2014, dia naneho hevitra i Shakira hoe: "Tsy hohadinoiko mihitsy fa nihaona tamin'ny fitiavako teo amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany aho."
Gerard Pique Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny soccer dia hita matetika amin'ny fanatanjahan-tena manjavozavo. Ny ankamaroan'ny mpilalao dia nizara tantara momba ny fanabeazana goavana ary manana ny lalao misaotra noho ny fitondrany harena be. Tsy izany no an'i Gerard Pique raha avy amin'ny fianakaviana ambony ambony ambony. Ny sary etsy ambany dia maneho ny fianakaviany Catalan voalohany. Fanamarihana: tsy misy i Marc Piqué zandriny lahy.
Ny fianakaviana Pique
RAY: Ny rain'i Gerard, Joan Pique dia heverina ho anisan'ny mpisolovava sy mpandraharaha tsara indrindra ao Barcelona. Ity ambany ity ny sarin'i Joan Pique sy ny Montserrat tsara tarehy izay nanambady nandritra ny fahatanorany.
Sarin'i Joan Pique sy ny vadiny mahafinaritra
MOMBA NY MAMAFY GERARD PIQUE: Ny renin'i Pique, Montserrat, no talen'ny hôpitaly iray malaza any Barcelone izay miresaka momba ny ratra amam-bozaka.
Montserrat no lohan'ny sendikan'ny aretina azo avy amin'ny atidoha ao amin'ny biraon'ny Gttmann malaza any Barcelona. Nahazo mari-pankasitrahana ara-pitsaboana lehibe izy ho an'ny fanarenana ny mararin'ny aretina cerebrovascular.
Azo atao tsara ny renin'i Piqué sy ny rafozambavin'i Shakira Fanamarihana ara-panatanjahantena. Toy izao no amaritan'i Monserrat ny evolisiona ny lalao zokiny indrindra: "Mahira-tsaina izy, nalain'izy ireo avokoa izy rehetra, naka ny baolina izy ary nanatsara azy tamin'ny iray". Montserrat dia miaiky fa indraindray izy dia mbola mientanentana mahatsiaro taona maro izay nilalao an'i Piqué (2004-2008) ho an'i Manchester United, indrindra rehefa nandao azy tany amin'ny seranam-piaramanidina tamin'ny 17 taona. Ao anatin'ny teniny ..."Nandeha nijery azy indray mandeha isam-bolana aho nandritra ireo efa-taona nijanonany tany Angletera."
Montserrat dia tia manoratra ny zava-drehetra momba ny zanany lahy miaraka amin'ny fakantsary nomerika. Nolazainy indray androany fa izy no tompon'andraikitra voalohany amin'ny Piqué niverina nody an-trano, voalohany tao Zaragoza ary avy eo tao amin'ny Barça malalany. Monserrat dia akaiky ny vinantovaviny, Shakira araka ny hita eo amin'ny sary etsy ambany.
Monserrat sy ny zanany vavy
rahalahiny avy; Gerard Pique dia manana zandriny lahy Marc Pique, izay iray amin'ireo mpankafy sy mpanohana lehibe indrindra.
Ny rahalahin'i Gerard Pique Marc Pique
raibe: Amador Bernabeu no rain'ny renin'i Gerard Pique, Montserrat.
Dadabe Gerard Pique- Amador Bernabeu
Filoha lefitra fahiny tao Barcelone izy. Nandritra ny adihevitra momba ny fahaleovantenan'ny 2017 momba ny fahaleovan-tena tany Catalonia, dia noheverin'ny maro izy ho toy ny iray amin'ny endrika ampahibemaso eo amin'ny vondron'olona Catalan, ny fifidianana ary ny bitsika ny fanohanany amin'ny Catalan. Taorian'izany, niatrika fanehoan-kevitra avy amin'ny mpankafy Espaniola izy noho ny fanohanany ny fitsapan-kevitry ny fahaleovan-tena Catalan. Misaotra azy, mbola nofinofin'i Piqué hatrany ny filoha FC Barcelona.
Gerard Pique Childhood Story Plus Untold Biography Facts -toetra
Gerard Pique dia manana ny toetrany amin'ny toetrany.
Ny herin'i Gerard Pique: Izy dia fandrosoana, voalohany, tsy miankina ary maha-olona.
Ny Fahalemen'i Gerard Pique: Manana fahazarana mihazakazaka amin'ny fihetseham-po ara-pihetseham-po izy. Na izany aza, i Shakira dia niasa tamin'izany hatramin'ny 2011.
Inona no tian'i Gerard Pique: Tiany ny mifalifaly amin'ny namana, manampy ny hafa. Mpihaino tsara koa izy.
Inona no tsy tia an'i Gerard Pique: Gerard Pique dia tsy tia ny manantena sy manantena ny fampanantenana.
Amin'ny ankapobeny dia saro-kenatra sy mangina izy. Izy koa dia mpandinika lalina ary afaka mampifanaraka amin'ireo hery manodidina azy. Mazava ho azy izany rehefa mijery azy milalao ny ekipany. Pique dia afaka mahita tsy misy fanavakavahana, eo amin'ny andaniny roa, izay manome azy ny fahafahana hamaha ny fifandonana.
Farany, Gerard Pique dia mijery an'izao tontolo izao ho toerana iray feno fahafaha-manao.
Gerard Pique Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Tetikasa manaitaitra
Tiany ilay fiaramanidina Luis Suarez.
Na dia lasa malemy aza izy Lionel Messi, Pique sy Dani Alves dia tia manohitra ny heriny sy ny toetrany ara-batana.
Tamin'ny vanim-potoana, nanamafy ny Pique imbetsaka i Legende Carles Puyol. Ity dia fitaovana amin'ny fanehoana ny toetrany amin'ny lalaon'ny play.
Mbola eo an-dalam-pandrosoana foana izy noho ny toetrany tsara indrindra.
Gerard Pique Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Momba ny anarany
Ny anarana feno an'i Gerard Pique dia - Gerard Piqué Bernabéu - Mampalahelo, ilay anarana 'Bernabeu' dia anarana antsoina hoe Real Madrid, noho ny filoham-pirenena lefitra, Santiago Bernabéu Yeste.
Santiago Bernabéu Yeste dia tompon'andraikitra amin'ny fisondrotan'ny Real Madrid ka nanao ny kianjany nomena azy.
Na izany aza, rehefa hitanao fa anarana tena iray amin'ireo anarana farany nataon'i Gerard Pique, dia azo antoka fa ho gaga ianao satria ny Catalan no tena katsahin'ny olona. Araka ny notaterina tany aloha tany amin'io fanoratana io, dia avy amin'ny reniny ny anarana, izay zanakavavin'ny filohan'i Barcelone teo aloha, Amador Bernabeu. Koa fantatsika ankehitriny: ny Bernabeus no nitondra ny roa lehibe eto Espaina.
Gerard Pique Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Tiany ny Rock Lady Gaga sy ny U2
Eny ary, mazava ho azy, ny ankamaroan 'izao tontolo izao dia mihaino mozika amin' ny karazany.
Ankoatra ny fifanarahana ekena fa samy manana ny feony manokana ny tsirairay. Ary i Gerard Pique-olona hafa mitovy amintsika ihany koa-dia manana ny azy ihany koa.
Raha ny antsasany kosa dia i Shakira, ny iray dia manantena azy ho mpankafy ny malalany, izay tena miavaka tokoa izy tahaka ny sary manjavozavo. Na izany aza, manana safidy mozika hafa izy; Ny sasany amin'izy ireny dia ny Lady Gaga, U2 ary Rihanna. Sarim-pianakaviana no feno ny hirany ary ampiasainy ho toy ny fialam-boly aloha sy aorian'ny lalao.
Gerard Pique Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ny sampy
Gerard Pique dia naneho ny fitoviana tamin'ny alemà, Franz Beckenbauer, nandritra ny taona maro, ka nahatonga ny sobriquet "Piquénbauer". Rehefa nanontany an'i Franz Beckenbauer ny mpankafy mikasika ireo fihetsika manintona azy, dia nilaza ny alemà malaza fa izy "Voninahitra" fa ny Espaniola dia mifandray aminy. Ity ambany ity ny Pique sy ny Idol, ny fifanakalozan-dry Beckenbauer ny sariny.
Gerard Pique sy Franz Beckenbauer
Na izany aza, raha mandinika ny zava-misy fa efa nanaja ny Galacticos izy, dia mahagaga ny mahita ny anaran'ny Real Madrid lejiona 'Hierro' ho famantarana faharoa.
FACT CHECK: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaranay Andy Carroll Child plus tantara tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
max kumar 8, 2018 Ao amin'ny 1: 06 am
lahatsoratra mahafinaritra misaotra ny fizarana vry tsara voasoratra momba ilay mpilalao
Ny tantaran'i Angel Di Maria ao amin'ny tantaram-pianakaviana malaza fa mbola tsy fantatra